Nico Nico Douga Downloader - Anime vidiyo anime na Niconico ebudata
Na-eji nke ochie. Pịa ebe a iji wụnye ụdị kachasị ọhụrụ 2.0.1
❝Anime vidiyo anime na Niconico ebudata❞
➶ Saịtị a na - enyere gị aka ibudata vidiyo Niconico ọ bụla site na ịbanye na vidiyo vidiyo.
Detuo URL vidiyo ahụ ma mado ya n'ime igbe dị n'elu, mgbe ndị na-ebudata Niconico ga-ahụ vidiyo ahụ ozugbo. Pịa aka na njikọ ibudata ma chekwaa vidiyo Niconico na diski mpaghara.
Onweghi faịlụ ebudatara Wụnye ndọtị ihe nchọgharị ahụ wee nwaa ọzọ.
Dị Mfe NicoNico Downloader
Mgbakwunye a na-enye gị ohere ibudata vidiyo, ọdịyo, onyonyo site na NicoNico. ➥ Wụnye ugbu a
Wụnye Ihe Nbudata Media Download
Na-akwado ọtụtụ weebụsaịtị. ➥ Wụnye ugbu a
Etu esi ebudata vidiyo agbakwunyere ozugbo?
Pịa aka nri na vidiyo ahụ
Họrọ “Save video as”
Detuo na ekwentị nwere koodu QR
Etu esi ebudata vidiyo NicoNico
Enwere m ike ịgwa gị na gị onwe gị kwa nnukwu onye na-ahụkarị ihe Niconico n'ihi na ị chọtara ụzọ gị ebe a. Niconico bụ nnukwu igwe okwu vidio ndị Japan na-ekerịta ihe, na-enye puku kwuru puku vidiyo na-adọrọ mmasị ma dị egwu. Agbanyeghị, anyị nwere ike lelee vidiyo Niconico na ntanetị ma ọ ga-ara ahụ nbudata vidiyo Niconico na ọdịyo n'ụzọ ndị isi. Maka nke ahụ, anyị na-enye gị otu ị ga - esi ebudata vidiyo Niconico na ntanetị kachasị mma na ntanetị Niconico Video Onlineer.
Mepee weebụsaịtị a
Tinye NicoNico video si URL wee pịa bọtịnụ Download.
Ga-ahụ ndepụta nke njikọ niile dịnụ.
Họrọ usoro na ogo ahụ ma nwee ọ enjoyụ na vidiyo ahụ n'ịntanetị!
Vidiyo na-ebudata n'efu site na Niconico na Nleba Nchọgharị / Tinye
Mepee ebe nrụọrụ weebụ Nicovideo.
Kpọọ vidiyo na NicoNico. Gbanwee ọkpụkpọ vidiyo na ọkpọọ iji nweta njikọ nbudata.
Mepee ndọtị a.
Chere obere oge.
Pịa na njiri mara ịchọrọ ibudata.
Na taabụ ọhụrụ, faịlụ ahụ ga-ebudata na akpaghị aka wee chebe na ngwaọrụ gị.
URL ndị akwadoro
Niconico, nke a na-akpọbu Nico Nico Douga, bụ ebe amaara vidio ndị Japan ama ama ebe enwere ọtụtụ ọwa vidiyo, dịka Ntụrụndụ, Egwu, Ndụ, Egwuregwu, Anime, Art, Egwuregwu na ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ikiri, ibugo, na ịkekọrịta vidiyo, ihe pụtara ìhè nke Nicovideo bụ na ọ na-enye ndị ọrụ edebanyere aha ha iziga ihuenyo mgbanye, ekwuputara ihe ndị ahụ na-agbanye na vidiyo ozugbo ma mekọrịta n'oge oge akọwapụtara, nke na-eduga usoro ejiji.
Maka ndozi kacha mma, Detuo anyị!
Emetụ akara ngosi ahụ aka ⁝ ma obu …
Emetụ akara ngosi ahụ aka ☆ ma obu ♡
Pịa Shift+Ctrl+D. Ọ bụrụ na-eji Mac OS X, Pịa Shift+⌘+D
⤓ Budata fbion.com ← Dọrọ nke a na ogwe edokọbara gị
Not na-ahụ ụlọ akwụkwọ edokọbara? Pịa Shift+Ctrl+B
Ọ bụrụ na-eji Mac OS X, Pịa Shift+⌘+B
Ma ọ bụ, detuo koodu niile dị n'okpuru ederede ederede wee mado ya na akara ibe edokọbara gị.
Lee nseta ihuenyo n'okpuru
Ihe nkiri vidiyo nke Niconico
Niconico (nicovideo.jp) bụ otu n'ime saịtị ekesara vidio ndị Japan na-eleta. Anyị etinyela mbọ dị ukwuu na Downloader Nicovideo a, ọ bụ ya mere ịnwere ike ibudata vidiyo ọ bụla na Niconico na sekọnd. Biko mara na faịlụ niile ebudatara bụ maka ojiji nkeonwe.
Budata nkọwa vidiyo Niconico dị elu
Budata vidiyo site na Niconico na mma kachasị mma. Budata Anime Movies na Anime Videos si NicoVideo na-enweghị nsogbu.
Chọpụta vidiyo kachasị amasị gị
Pịnye mkpụrụokwu ahụ na mmanya ọchụchọ, vidiyo Niconico metụtara ga-egosi. Chekwaa vidiyo nke Niconico kachasị amasị gị maka iji offline rụọ ọrụ ndị a dị mfe.
Kpamkpam nchebe na iji free
Agaghị agwa gị ka ị kwụọ ụgwọ ego, debanye aha ma ọ bụ tinye mgbakwunye mmemme. Enweghị popup, enweghi nje, saịtị ahụ dị ọcha.
Jiri nwayọ rụọ ọrụ n'ime ihe nchọgharị ọ bụla
Ihe nlere Niconico na-arụ ọrụ nke ọma na Google Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ bụ ezigbo dakọtara na sistemụ arụmọrụ Mac.
Weputa ụda sitere na Nico Nico Douga wee chekwaa ya.
Budata NicoNico thumbnail
Budata NicoNico thumbnail zuru oke 720p.
Ajuju Ndi Oge ✉
Chọta Ajụjụ Gị na Azịza Gị Ebe a - Olee otú ibudata vidiyo NicoNico?
+ Gịnị bụ NicoVideo?
A na-akpọ Niconico (nke a makwaara dị ka NicoVideo ma ọ bụ Nikoniko) na mbụ Nico Nico Douga. Yiri YouTube, ọ bụ saịtị nkekọrịta vidiyo na-ewu ewu na Japan. Nikoniko ma ọ bụ Niconico pụtara ịmụmụ ọnụ ọchị n’asụsụ Japanese.
+ Etu esi ebudata Anime Video site na Nicovideo?
Chọrọ ilele vidiyo anime n'ịntanetị? You nwere ike ibudata vidiyo Anime na Niconico. Niconico bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ kachasị anime na Japan.
Weebụsaịtị a nwere otutu ọwa gụnyere Anime, Vocaloid, Ntụrụndụ, na Egwu. Na weebụsaịtị a, ị nwere ike ịhụ ihe nkiri anime kachasị ewu ewu, usoro anime na vidiyo Anime na-ekiri n'efu, gụnyere Naruto Shippuden, Otu iberibe, Bleach, Dragọn Ball Z, Fairy Tail, Skip Beat, Shugo Chara, Fullmetal Alchemist na ndị ọzọ. Ọzọkwa, NicoNico bụ Ọnọdụ 1. nke ịchọta ihe egwu egwu ohuru nke Vocaloid nke ndị na-emepụta Japanese mere.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata Nicovideo ilele offline n’oge ọ bụla na ebe ọ bụla, ị ga-ebu ụzọ chọta onye a pụrụ ịdabere na Download Download Nicovideo Downloader. Lee, anyị na-ewepụtara gị ihe nbudata vidiyo NicoNico nke na - enweghị ihe ọ bụla.
➥ Wụnye ugbu a
+ Etu esi ebudata NicoVideo na Mac na-enweghị Qualitykwado Ogo?
Onye na-ebudata anyị NicoNico ga - enyere gị aka ịgwakọta faịlụ na-akpaghị aka ịchekwa vidiyo HD HD zuru ezu na-enweghị ịhapụ ịdị mma.
+ Etu esi ebudata Anime Songs si NicoVideo (Nico Nico Douga)?
NicoVideo ma ọ bụ naanị NicoNico, bụ weebụsaịtị a na-ahụkarị vidio Japanese nke na-emekọrịta ihe yiri nke YouTube ebe ndị ọrụ nwere ike ilele ọtụtụ vidiyo vidiyo na-atọ ụtọ. Ihe dị iche na nke NicoVideo na YouTube bụ na ihe ka ukwuu na NicoVideo bụ nke gbadoro anya na ọdịnala pop nke Japanese (anime, egwuregwu vidio, vidiyo Japanese pop wdg).
Site n’oge ruo n’oge, na NicoNico, enwere vidiyo egwu anime nke nwere egwu anime na ha nke ị nwere mmasị ma chọọ itinye ihe ọkpụkpọ MP3 ma ọ bụ kpọọ CD. Mana ụfọdụ n'ime ndị a bụ ihe pụrụ iche na ọ bụghị mgbe niile enwere ike ibudata abụ ahụ n'onwe ya.
Enwere otutu uzo dị iche iche na ụzọ maka nbudata vidiyo egwu sitere na NicoVideo mana ihe ịchọrọ n'ezie bụ ihe ntụgharị nke NicoNico MP3 nke na-enye gị ohere ibudata ọdịyo na egwu egwu site na saịtị vidio Japanese ama ama.
+ Kedu ka ị ga - esi chekwaa Audio dị elu site na Nicovideo?
Ndị na - ebudata Nicovideo ga - achọpụta ya ozugbo ma gosipụta njikọ nbudata ọdịyo 192kbs dị na weebụsaịtị Nicovideo.
+ Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị m ike ibudata vidiyo site na nicovideo.jp?
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ibudata vidiyo Nico Nico Douga ozugbo, ịnwere ike iji ngwanrọ na-edekọ vidiyo ka ịdekọ obere vidiyo ịchọrọ.
+ Enwere m ike ịkpọ Video ebudatara na Ngwaọrụ m?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị na - ebudata vidiyo ga - ebudata vidiyo site na nicovideo.jp na faịlụ vidiyo MP4, ị ga - enwe ike ịme vidiyo ndị ebudatara na ngwaọrụ mkpanaka gị na enweghị nsogbu ọ bụla.
+ Enwere m ike isoro ndị Enyị M Kpee vidiyo ebudatara?
Mgbe itinyere vidiyo na nicovideo.jp, ị ga - ewere vidiyo ndị ahụ maka ojiji nkeonwe, mana ịkesa ya na netwọbụ ma ọ bụ zigara ya enyi ọzọ.
+ Onye na-ebugote vidiyo na-echekwa Videosdekọ ọ bụla nke ebudatara?
Weebụ ihe na-ebudata vidiyo ahụ, ngwa ma ọ bụ mmemme anaghị echekwa faịlụ ọ bụla ịchọrọ ibudata. Mgbe itesịrị nbudata vidiyo, ịnwere ike ịme otu vidiyo ahụ n'onwe gị.
+ Ọ bụ iwu ọ bụla ibudata vidiyo si nicovideo.jp?
Ọ dabere na usoro na nicovideo.jp. Maka vidiyo nwebisiinka, ndị ọrụ nwere ike ibudata ha maka iji ya mee ihe n'ụzọ dị mfe; maka vidiyo nwebisiinka, ndị ọrụ ga-arịọ maka ikike n'aka onye nwe vidiyo ahụ.
+ Kedu otu esi ebudata vidiyo niconico dị ka mp4 1080p?
Nicovideo anaghị enye vidiyo zuru oke nke HD 1080 dị ka otu faịlụ, yabụ ịkwesiri ịwụnye ihe ntanetị NicoNico iji budata vidiyo dịka mp4 1080p.
+ Enwere ike ibudata vidiyo / mp3 site na NicoNico Douga?
Wụnye ihe ntinye NicoNico, ịnwere ike ibudata vidiyo ị na-elele na Nicovideo. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịbanye iji nwee ike ilele usoro anime ma nwee ezigbo ego iji lee vidiyo HD mma.
+ Nico Gịnị Na-ebi Ndụ?
Nico Live bụ ọrụ ịntanetị na-enyocha ọhụụ ebe ndị ọrụ nwere ike lelee ma kesaa mmemme ndụ ma zipụ ma lelee okwu niile na ozugbo.
+ Etu esi ebudata vidiyo NicoNico na gam akporo Smartphone ma ọ bụ Iphone, Ipad?
Ọ bụrụ na iji ekwentị gam akporo, ị nwere ike iwunye ndọtị NicoNico nke na-ebudata Firefox. ➥ Wụnye ugbu a
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone ma ọ bụ iPad, ịkwesịrị ịbanye na njikọ Nicovideo na igbe ntinye ahụ n'elu.
Nbudata Niconico Ntanetị - Download Niconico Video na Audio ka MP4 / MP3 maka Free
2 ndị ọrụ gosiri
N’oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mkpesa na ha na-ezute okwu mgbe niile dị ka njupụta netwọ ma ọ bụ mkpọchi, ogo vidiyo dị ala, mmachi dị iche iche, wdg ahụmahụ ndị ọrụ ọjọọ. Ya mere, ndị mmadụ chọsiri ike ịchọta ụzọ ibudata vidiyo Niconico maka ọonụ na-anọghị n'ịntanetị! Re kechioma ibi ebe a.
Echere m na ọ bụ mgbakwunye dị mfe, dị mfe ma dịkwa mma nke ukwuu. Ọ ka mma karịa Nico Firefox.
Nnukwu ngwá ọrụ iji nyere m aka ibudata ma chekwaa usoro anime na nchịkọta m.
Mgbati a na-enye m ohere ibudata Nico Nico Douga n'ụzọ dabara adaba.
➥ Zipu ikwu
Onye na-aputa ihe
Otu esi eji ya
Soro ndị enyi gị kerịta ya
Daalụ maka iji ọrụ anyị!
Ihe Ntugharị Vidiyo Niconico 2021
Gbanyụọ ọnọdụ gbara ọchịchịrị maka Chrome
Download onwe Facebook videos
Gbanwee agba na Facebook
Gbanwee ndabere na Facebook
Nyochaa Ebe nrụọrụ
Ozugbo ị denyere aha na akwụkwọ akụkọ anyị, ị nwere ike nweta ozi nke mmelite kachasị ọhụrụ na atụmatụ nke weebụsaịtị a.
✉ Idenye aha
Koodu QR findmyfbid savefrom odownloader bitdownloader keepvid
Ihe TOS amụma nzuzo Kpọtụrụ anyị Sitemap
➴ Chọta Facebook ID